Farmaajo oo maamuus u sameeyay Kalluunka la bilaabay in loo dhoofiyo Itoobiya & Qaad looga bedelanayo - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Farmaajo oo maamuus u sameeyay Kalluunka la bilaabay in loo dhoofiyo Itoobiya & Qaad looga bedelanayo - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay maamuus uu caawa u sameeyay Kalluun la bilaabay in loo dhoofiyo dalka Itoobiya, si looga bedesho Qaadka loo ogolaaday inay Soomaaliya keento.
Xaflad arrintan lagy maamuusay ayuu Farmaajo warbixin uga dhageystay Wasiirrada Wasaaradaha, Kalluumaysiga iyo Cabdullahi Bidhaan Warsame iyo Gaadiidka iyo Duulista Hawada urraan Axmed Faarax oo sheegay in Ganacsiga ka dhexeeya dalkeenna iyo dalalka dariska uu ku saleysan yahay isu dheellitirnaan iyo waxwada qabsi iyo xoojinta wax-soosaarka, taas oo suurta gelinaysa in dalagyada iyo wax-soosaarka dalka ay ka muuqdaan suuqyada dalalka Gobolka.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bogaadiyey suuqa ganacsi ee Itoobiya oo u soo kordhay kalluumaysatada Soomaaliyeed, isagoo sheegay in la joogo waqtigii aynu kula tartami lahayn dalalka gobolka waxsoosaarka gudaha dalkeenna.
Previous articleGuddiga Amniga Qaran ee Doorashooyinka oo la shaaciyay (Akhriso Xubnaha ka mida)
Next articleQaraxyo laga maqlay Magaalada Muqdisho iyo Gaari Miino kula qaraxday agagaarka…